Apple waxay weydiineysaa dadka isticmaala MacBook Pro Retina haddii ay isticmaalaan qalabka taleefanka lagu xiro | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay weydiineysaa dadka isticmaala MacBook Pro Retina haddii ay isticmaalaan qalabka dhegaha
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha Apple ay hadda sameyneyso oo aysan waligeed (ugu yaraan inta aan xusuusto) horay u qaban. Tani waa sahan lagu sameeyo dadka isticmaala MacBook Pro oo leh muuqaalka Retina kaas oo waydiiyo iyaga ku saabsan isticmaalidda qalabka taleefanka maqalka. Intaa waxaa dheer, sahanku wuxuu kaloo weydiinayaa inta ka hartay dekedaha MacBok Pro.
Runta ayaa ah in la arko halka Apple ay ku dhaqaaqeyso iphone 7 iyo 7 Plus, leh ka saarista jaakada 3,5mm Waxaan kaliya sugi karnaa wax yar si aan u aragno sida ay ugu baaba'ayso aaladaha Apple inteeda kale iyo noocyada kale.
Waa macquul in inta lagu guda jiro bishaan Oktoobar shirkadda Cupertino ay na soo bandhigi doonto wixii la filaayay waxayna umuuqataa inay tahay wax la badalay MacBook ProLaakiin markan u malayn mayno inay ka saari doonaan dekedda taleefanka gacanta haddii ay run ahaantii hadda sahan sameeyaan. Tani waa geedi socod bilaabi lahaa in lagu arko jiilka xiga ee Mac waxaana macquul ah inuu ka bilowdo barnaamijka 'MacBook Pro' ee muuqaalka Retina.
Faahfaahin kale ayaa ah in la arko haddii ay dhab ahaantii fiiro gaar ah u leeyihiin ama aysan ahayn waxa isticmaalayaashu ka jawaabayaan, tan iyo weligeen ma ogaan doonno jawaabta rasmiga ah ee sahanka. Waxa cad ayaa ah in talaabada lagu sameeyay moodooyinka cusub ee iPhone aysan noqon doonin mid labaad sida haddii ay umuuqato inay kudhaceen nooca USB C ee 12-inch MacBook ah, isku xirahan wuxuu bilaabi karaa in lagu isticmaalo MacBook Pro ee kujira Oktoobar, laakiin kama aysan baahin inta ka hartay fikradda sumadda. Ka takhalusida jaakada 3,5mm waxay umuuqataa inay tahay wax saamayn doona dhamaan wax soo saarka Apple mustaqbalka fog.
Adiguna, ma isticmaashaa dekedda dhagaha ee Mac-ga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » Apple waxay weydiineysaa dadka isticmaala MacBook Pro Retina haddii ay isticmaalaan qalabka dhegaha
Weligay si caadi ah ugama aanan isticmaalin Bluetooth
Ku jawaab José luis
By the way, haddii uusan GPS ku jirin Apple Watch, maxaad ula socotaa Watch os3 markaad bilowdo adeegsiga jimicsiga waxay ku weydiineysaa rukhsaddaada inaad isticmaasho goobta saacaddaada?